Laftagareen’Musharraxiinta is hubeynaya waxaan ula dagaallamaynaa sida al-Shabaab’ | Warbaahinta Ayaamaha
BAYDHABO-AYAAMAHA-Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xassan Maxamed “Laftagareen” ayaa si kulul uga hadlay dad uu ku sheegay musharraxiin xilal raadinaya oo is hubeynaya.
Laftagareen oo ka hadlayay munaasabad lagu dhiirrigelinayay ciidamada qalabka sida – oo ka dhacday xarunta Madaxtooyada magaalada Baydhabo – ayaa sheegay in wali ay taallo shaqo badan oo ku aaddan xaqiijinta amaanka.
“Annagoo awalba amniga sugnay ayaa waxaan u baahan nahay in labada gacmoodba lagu shaqeeyo, oo gacanna amniga lagu sugo, shabaab meesha uu joogo looga daba tago, gacanna amniga magaalada lagu sugo, maadaama dad badan ay imaanayaan oo aan aaminsan nahay inay kusoo dhuumanayaan Shabaabkii,” ayuu yidhi.
Madaxweyne Laftagreen ayaa halkaas ka sheegay in siyaasiyiinta qaarood “ay is hubeynayaan si ay khalkhal u geliyaan amniga doorashada”. Ma u sheegin magacyada siyaasiintaasi iyo faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan arrintaasi.
“Qofka marka uu xilka raadinayo miyir badan ma laha, wax walba ayaa ka suurtooba. Wax aanan kursiga ahayn uma jeedo.
“Muddadaan dambe waxaa soo siyaaday wax la yiraahdo cagojugleyn. Farriin baa laguu keenayaa, waxaa laguu sheegayaa in ninkii hebel ahaa uu soo gatay hub (2 PKM, 3 PKM), wuxuuna yiri ‘haddii kursigeyga hadal la geliyo tii dheered baa dhaceysa’,” ayuu yidhi.
Wiil Soomaali ah oo Tahriib ku galay dalka Talyaaniga oo ku...
Rooble oo hurdadii ka kacay kadib cadaadis uu kala kulmay Beesha...
Qodobada ay isku fahmi waayeen Ahlu-Sunna iyo Galmudug ee waan waanta...